WARBAAHINTA | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category WARBAAHINTA
Waxaa wali isa soo taraya wararka la xiriira qaraxyo waaweyn oo ka dhacay caasimadda Lubnaan ee Beirut. Dad gaaraya 78 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qaraxyada, halka dad ka badan afar kun oo qofna ay ku dhaawacmeen. Qaraxyada oo gilgilay caasimadda Beirut ayaa argagax geliyay dadka shacabka, waxaana sida ay sheegeen dad goobjogayaal ah soo daatay muraayadaha dhammaan dhismayaashii ka ag-dhawaa goobta ay qaraxyadu ka dhaceen. “Si lama filaan ah waxaan beelay dhagaha, maadaama aan aad ugu dhawaa halka ay wax ka dhaceen, waxaan dareemay inay wax khaldan yihiin, waxaa inagu soo daatay muraayadaha dhismayaasha”, ayuu yiri …
Mirriam Menkin waxay ahayd qofkii ugu horreysay ee ku guuleysta in ilmo ay ku dhashaan dhalo lagu shubay labo dhecaan oo la isku beeray, taas oo wax badan ka badeshay habka taranka ee adduunka, balse dad yar ayaa maanta magaceeda garanaya. Bishii Febraayo ee sanadkii 1944 ilaa 1943, sheybaariste Mirriam Menkin waxaa ay soo jeeday habeenkii oo dhan, waxaana iyada iyo nin ay wada shaqeynayeen oo lagu magacaabo John Rock ujeedkoodu ahaa sidii xal loogu heli lahaa dadka madhaleyska ee aan ilmaha dhalin balse doonaya inay ubad helaan. Waxaa ay sheybaarkii ay ka shaqeneysay isugu geyn jirtay shahwa laga soo …
Lix arrimood ka ogoow shirka Dhuusamareeb.
Afrikaan.so, July 24, 2020
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku sugan madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, ajandaha ugu weyn ee shirkoodana waa sidii la isugu waafaqi lahaa nooca ay noqoneyso doorashada qaranka. Dhinacyada siyaasadda ayaa si weyn ugu kala aragti duwan arrimaha doorashada, iyadoo dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u xusul duubeyso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. Laakiin walaaca ay garabyada kasoo horjeeda dowladda qabaan ayaa ah in arrintaasi ay horseeddo dib u dhac iyo muddo kororsi. Shirka oo markii hore la qorsheynayay inuu ka dhaco …
Barnaamijka toddobaadlaha ah ee BBC ee lagu magacaabo The Boss ayaa ah barnaamij taxana ah oo si gaar ah loogu eego taariikhda hogaamiyayaasha dhanka ganacsiga guud ahaan caalamka. Toddobaadkan waxay BBC la hadshay Ian Powell iyo Jackie Hueftle oo ah milkiilayaasha shirkadda Kilter Grips, oo ah shirkad ku taalla Mareykanka islamarkana saameysa waxyaabaha darbiyada guryaha lagu fuulo iyo kuwa lagu qurxiyo. Ian Powell ayaa soo maray noolal adag ka hor inta uusan ganacsiga bilaabin. Waxaa uu hore uga tirsanaa xulka qaranka Mareykanka gaar ahaan kuwa tartanka fuulidda buuraha horraantii 1990, ilaa 2010. Markii ay da’diisa gaartay 39 ayuu noqday darbi-jiif …
Dadka reer Kenya ayaa u dhaqaaqay gargaaridda haweenaydii korinaysay carruurta bilaa aabbaha ah, ee laga duubay muuqaalka iyadoo dhagxaan u karinaysa siddeedeeda caruurta ah si ay uga dhaadhiciso in ay cunto u diyaarineyso. Peninah Bahati Kitsao, oo ku nool Mombasa, waxay rajeyneysay inay hurdo qabato, inta ay cuntada ka sugayaan. Waxa ay ka shaqayn jirtey gooob dharka lagu dhaqo laakiin shaqadii noocaas ahayd way adkaatay maaddaama dalka la xaddiday is dhex galkii bulshada sababo la xidhiidha coronavirus. Deriskaada oo ka naxday xaaladdeeda, waa Prisca Momanyi, ayaa warbaahinta ku faafisay dhibaatadii haweeynaydaasi haysatay. Kaddib markii laga waraystay, talefiishanka NTV ee Kenya, …
Alle ha u naxariistee waxaa magaalada London ku geeriyoodey Bani Cabdalla Cali oo ka mid ahaa xiddigihii kubadda koleyga Soomaaliya. Wuxuu la xanuunsanaa fayraska Covid-19. Baana ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ku jiray Isbitaal ku yaal London isagoo ku jiray xaalad koomo ah sida ay BBC u sheegeen dad aad ugu dhawaa marxuumka. Baana Cali wuxuu ku dhashay magaalada Baraawe, wuxuuna ku barbaaray magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu waxbarashada maadiga iyo diinta ku qaatay. Wuxuu markii dambe u wareegay dhanka ciyaaraha kubadda koleyga oo uu aad u jeclaa. Dadka ugu tacsiyeynayay baraha bulshada waxay ku tilmaameen “Geesi u taagna horumarinta …
Filmka ‘dhallinyaro’ oo dhawaan Jabbuuti lagu soo bandhigay waxaa jilayaal ka ah saddex hablood, waxaana samaysay oo qortay sheekada Filmkaas Luula Cali Ismaaciil, waxa uu ku guulaystay billado badan, sida oo kalena jilaaga koobaad ee Deeqa waxay ku guulaysatay, jilaagii Geeska Afrika. Waxaa lagu metelay Jabbuuti, waana filimkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu soo bandhigo dalkaas. Waa dhallinyar ku jira da’aadda 18 jirka, oo ku dhex jira nolol su’aalo badan, kuwaas oo ay ugu mudan yihiin waxbarashadooda iyo mustaqbalka wax barashadaas-ma dalka ayaad ku dhammaysataa? Ma qurbaha ayaad u aaddaa? Iyo weliba sidee isu qabadsiisa riyooyinkaaga iyo kuwa …
Jawaabta waa haa, si fiican u fiiri magacyada wasiirada iyo qabiilada ay ka soo jeedaan. Sidoo kale maxay tahay ujeedada loo sheego magacyada qabiilada la magacaabay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo magacaabay Gole Wasiiro ka kooban 23 xubnood, kaasoo maalmihii la soo dhaafay si weyn loo sugayay, waxaana Wasiirada ku jira Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka iyo xubno horay xilal u soo qabtay. Wasiirada la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo loo magacaabay Wasiirka Amniga dowlada Goboleedka Galmudug, iyadoo Xildhibaan Fiqi ka mid ahaa Xildhibaannadii mucaaradka ee si weyn uga soo horjeeday doorashadii …
Xiddigta Instagram ee Iran ayaa waxaa xabsiga ku haleeyay coronavirus, sida uu sheegay qareenkeeda. Khishvand, oo Instagram looga yaqaano Sahar Tabar ayaa caan noqotay kaddib markii ay barteeda soo dhigtay sawirro ay isu ekeeysiisay kuwaasi oo lagu tilmaamay nooca zombie ee Angelina Jolie. Ms Khishvand ayaa xabsiga loo taxaabay dhammaadkii sannnadkii tagay ee 2019-ka kaddib markii lagu soo eedeeyay dambiyo ay ka mid yihiin aflagaaddo iyo khalalaase. Hase yeeshee madaxa xabsiga ay ku xiran tahay waxa uu gaashaanka u daruuray inuu Fatemeh ku dhacay fayraska Corona. ”Warka uu sheegay qareenka Fatemeh Khishvand ma ahan mid xaqiiq ah.” Waxaa sidaasi wakaaladda …
Daraasad laga soo saaray UK ayaa ku talisay in la oggolaado ku deeqista shahwada laga qaado ragga geeriyooday. Khubarada sameeyay cilmibaaristan, oo lagu daabacay wargeyska arrimaha caafimaadka, ayaa sheegay in deeqaha lagu bixiyo xubnaha iyo unugyada taranka ee dadka geeriyooday ay wax weyn kusoo kordhinayaan dadweynaha. Sanadkii 2017-kii, UK waxaa ku dhalatay 2,345 carruur ah oo ka abuurmay shahwo lagu deeqay. Hase ahaatee, waxaa marba marka ka dambeysa sii yaraanaya deeqda noocaas ah ee waddanka laga helo, sababo la xiriira shuruucda loo maro oo aad u adag. Shahwada ragga ayaa laga qaadi karaa marka ay dhintaan ka dib, iyadoo lagu …